နာဂအိ သည် မြန်မာပြည်သို့ ဘုန်းတော်ကြီးများဦးဆောင်သော ဆန္ဒပြပွဲကို ဖြိုခွဲမှုမတိုင်ခင် နှစ်ရက်အလိုတွင် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။  ထိုအရေးအခင်းသည် လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်းများတက်လာခြင်းမှ အစပြုခဲ့ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများ ဦးဆောင်သော လူထုဆန္ဒပြပွဲကြီး အသွင်ပြောင်းလာခဲ့သည်။ 
ကန်ဂျီ နာဂအိ ဆုပြင်ဆင်
↑ "Japanese photographer killed, another foreign journalist injured" (Press release). Reporters Without Borders. 2007-09-27. Archived from the original on3October 2007. Retrieved 2007-09-29.
↑ "Japan to demand full explanation of death of journalist in Myanmar"၊ Canadian Press၊ 2007-09-29။ 2007-09-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Raw Footage of Execution။ Getaway Pundit (2009-07-22)။ 2009-07-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “This is raw footage of the execution of Japanese journalist Kenji Nagai by the Burmese junta on September 27, 2007.”
↑ "New footage of journalist shot in Burma shows soldier leaving scene with camera"၊ Japan News Review၊ 2007-10-09။ 2007-10-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Deputy foreign minister leaves for Myanmar following journalist killing"၊ National News၊ Mainichi Daily News၊ 2007-09-30။ 2007-10-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kyaw Min Lu (Shwe Pyi Thar)။ "Prevent salt destroying the Soup (ပြည်ပန်းညိုချိုချင်လျက်၊ ဆားကမဖျက်အောင်)" (in မြန်မာဘာသာ)၊ The Mirror၊ 2007-10-13၊ စာ-6and 7။ 2007-10-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကန်ဂျီ_နာဂအိ&oldid=539818" မှ ရယူရန်
၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၉:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၉:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။